February 1, 2020 - khitalinmedia
ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရားကုန်ပေါ်တက်ပီး အရက် ဘီယာသောက်တဲ့ တရုတ်များ။ ဘာသာတရားကို ချနင်း ပီးစော်ကားလိုက်တာလား
February 1, 2020 Khitalin Media 0
ဒီနေ့ – ၁.၂.၂၀၂၀ – ရက် ညနေ ၅နာရီ အချိန်ခန့် ပုဂံမြို့ဟောင်း စူဠာမဏိဘုရား တောင်ဘက် ရှေ့ဟောင်းအုတ်ကုန်းဖြစ်သည့် အိုးခြမ်းပဲ့ ကုန်းတွင် တရုတ်ခရီးသွားဧည့်သည်မှ ကိုယ်ပိုင်မော်တော်ကားဖြင့် ရောက်ရှိလာရာ ထိုအုတ်ကုန်းပေါ်ထိ မောငးတက်လာပြီး သည်နှင့် အရက်ဘီယာတစ်ဖာ.နှင့် သောက်မည်ပြုစဉ် ထိုအုတ်ကုန်းပေါ် တွင် ရှိသော […]
ညဘက်အိပ်ရေးပျက်ခံတာကြာရင် ဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဆိုးကျိူးများ
ညဘက်ကျရင် မျက်စိမှိတ်မယ့်အစား ဘယ်တော့မိုးလင်းမှာလဲလို့ နာရီပဲထကြည့်နေရတာမျိုး ကြုံဖူးကြလား။ ဒါမှမဟုတ် တခုခုလုပ်နေလို့ မအိပ်ဖြစ်တာဆိုလည်း ရလဒ်ကတူတူပဲလေ။ အိပ်မပျော်တာဖြစ်ဖြစ်၊ မအိပ်လိုက်ရတာဖြစ်ဖြစ်၊ အိပ်ပျော်လိုက်နိုးလိုက် သံသရာလည်နေတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆုံးခန္ဓါကိုယ်မှာဖြစ်လာမယ့်အကျိုးဆက်ကတော့ သိပ်မကွာကြပါဘူး။ ညအိပ်မပျော်တဲ့ရက်တွေ များနေတဲ့သူတွေမှာ နှလုံးကျန်းမာရေးကို ပိုပြီးစိုးရိမ်ဖို့လိုနေပြီလို့ သုတေသနအသစ်က သတိပေးလာပါတယ်။ ညဘက်အိပ်မပျော်တဲ့သူတွေမှာ နှလုံးရောဂါဖြစ်လာနိုင်ခြေ၊ နှလုံးလုပ်ဆောင်ချက်ရုတ်တရက်ရပ်ဆိုင်းခြင်းအန္တရာယ်နဲ့လေဖြတ်ခြင်းအန္တရာယ်ပိုများတယ်လို့ ဆက်နွယ်မှုကိုတွေ့ရှိခဲ့တာပါ။ “ […]
အလှပြင်ရတာမကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေရဲ့ စိတ်နေသဘောထားနဲ့ခံယူချက်များ
အလှပြင်ရတာကို မကြိုက်တဲ့မိန်းကလေးတွေဆိုတာ အတော်နည်းပါတယ်။ အလှပြင်တာ မကြိုက်တဲ့ကောင်မလေး ရှိခဲ့ရင် ရှာမှရှားတဲ့ ကောင်မလေးအမျိုးအစားပဲ ဖြစ်ပါတယ်။တကယ်လည်း အလှပြင်ရတာကို မကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတွေ လောကမှာ ရှိနေတတ်ပါတယ်။အလှပြင်တာကို မကြိုက်ကြတာကို တစ်ချို့တွေက ထူးဆန်းတယ် မြင်ကြပေမဲ့ သူတို့ကတော့ အခုလို သဘောထားလေးတွေနဲ့ ရှိနေတဲ့သူလေးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝဆန်တာကို သဘောကျလို့ […]
ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေမီးလောင်နေပါကြောင်း
ကပ်ဘေးရဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ဇွဲကပင်တောင် လက်ရှိအခြေနေမီးလောင်နေပါကြောင်း ကပ်ဘေးရဲ့ ဒုတိယအဆင့် ငှက်တွေ ကောင်းကင်မှာပျံနေရင်းနဲ့မျက်လုံးတွေလည်ပင်းတွေကနေ သွေးတွေထွက်ပြီးပြုတ်ကျကုန်တယ်…. နှံကောင်တွေ အများကြီး ယာခင်းတွေဆီကို ဆင်းလာပြီးဖျက်စီးတယ် ….ငှက်တွေအစုလိုက်အပြုံလိုက် လူတွေနဲ့ အနီးဆုံးကိုရောက်လာတယ်…. အဲဒါတွေက ကပ်ဘေးရဲ့ဒုတိယအဆင့်ပါ…. ပထမအဆင့်က ရောဂါပိုးကူးစက်တယ်….. ကပ်ဘေးဆိုတာ တဆင့်ပြီးတဆင့်လာတာပါ….. တတိယ […]
ဖုန်းသုံးသူတိုင်းသိထားသင့်တဲ့ ဖုန်းလေးလံနှေးကွေးခြင်းကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်မယ့် နည်းလမ်းများ
၁. နေရာလွတ်ပြည့်နေခြင်း Storage 16GB လောက်ကို 500MB လောက်ပဲ ကျန်အောင် ပြွတ်သိပ်သွင်းထားမယ်ဆိုရင်တော့ သင့်ဖုန်းလေးလံလာမှာအမှန်ပါပဲ။ ဖုန်းထဲမှာ ရှိနေတဲ့ App cache တွေကလည်း နေရာအများကြီးယူပါတယ်။ ဒီတော့ အသုံးမလိုတဲ့ App တွေကိုဖျက်ပစ်ပါ။ Junk File တွေ Cache file […]
အလှူ ညတရားပွဲမှာ ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှာ သွားလိုက်သောအခါ…
အလှူမှာ ညတရားပွဲ ဓါတ်ပုံရိုက်ရင်း မဏ္ဍပ်ရှေ့ထွက်ထိုင်နေမိချိန်လေး …. ကလေးလေးတွေ ဘုန်းကြီးကားနားမှာ တွေလို့ ကျွန်တော့်က ကားကိုဆော့နေကြတယ်အထင်နဲ့ သတိပေးဖို့အနားသွားမှပဲ ဆော့နေကြတာမဟုတ်ဘူးဗျ…. ဘုန်းကြီးကားကို သူတို့အကျီင်္ လေးနဲ့ ဖုန်တွေသုတ်ပေးနေတာပဲ။ ခုအချိန်မှာ လူကြီးတွေဘယ်လိုစိတ်ဓါတ်တွေပဲရှိနေကြပါစေ ….. နောင်တစ်ချိန်လူကြီးဖြစ်လာကြမဲ့ ကျွန်တော့်တို့ရွာက ကလေးလေးတွေရဲ့ ခုလိုစိတ်ဓါတ်လေးတွေတွေ့ရ‌ပြန်တော့လဲ ကြည်နှူးမိရပြန်ပါတယ်။ ကလေးလေးတွေရဲ့ […]
နေ့ခင်းကြောင်တောင် မိန်းခလေးတစ်ယောက် အတင်းအဓမ္မ အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်(ရုပ်သံ)
နေ့ခင်းကြောင်တောင် မိန်းခလေးတစ်ယောက် အတင်းအဓမ္မ အနိုင်ကျင့်မှုဖြစ်(ရုပ်သံ) မိန်းခလေးတစ်ယောက်ကို အနိုင်ကျင့်တဲ့ ယောက်ျား သိပ်ရွံဖို့ကောင်းတယ် အကြောင်းအရာတော့ အပြည့်အစုံမသိသေးပါဖူး ။ မိန်းခလေးပြောပြတာတော့ လက်ထပ်ယူပီးသား။ ကွာရှင်းပီးတာ ၆ လကျော်ရှိပီ။ ဘယ်လိုပဲပတ်သက်တဲ့အတွဲဖြစ်နေပါစေ ခုလို မတရား လူမဆန်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ မလုပ်သင့်ဖူး။ နေ့ခင်းကြောင်တောင်ကြီး လူတွေကြားထဲမှာတောင်မှ ကောင်မလေးကို ကတ်ကြေးနဲ့ထိုးတာ […]
အရွယ်ရောက်ပြီးသား အမျိုးသမီးတစ်ယောက်က လစဉ်ဓမ္မတာလာတာနဲ့ ဓမ္မတာမလာမီမှာ အဖြူဆင်းတာတွေက ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီဓမ္မတာလာတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ အဖြူဆင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် အရောင်အဆင်းကိုကြည့်ပြီး သားအိမ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သတိထားနိုင်ပါတယ်၊ ဒီတော့မှ လိုအပ်တဲ့ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေကို ကြိုကြိုတင်တင် လုပ်နိုင်ထားနိုင်မှာပါ။ (၁) အဖြူရောင် အဖြူရောင် ဒါမှမဟုတ် ခရင်မ်ရောင် ဆိုရင်တော့ ပုံမှန်ကျန်းမာရေးကောင်းတဲ့ အခြေအနေပါ။ […]
အသဲကှဲဖူးသူတိုငျး ဖတျကွညျ့ပေးပါ ….
အရမျးခဈြရတဲ့ သူကို….ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ သူတိုငျးဟာနာကငျြစရာတှကေို မပြေ့ောကျဖို့ အတှကျ သူတို့က…….ရညျးစားတှေ ထားခငျြရငျ ထားမိလိမျ့မယျခဈြလို့တော့……မဟုတျဘူး…..သူတို့၏ ဒဏျရာတှကေို သကျသာမလားဆိုတဲ့အတှေးလေးတဈခုနဲ့ ……….. သူတို့ရဲ့ လုပျရကျတှေ……မှားမှနျးသိနပေမေဲ့လညျး ဆကျမှားနမှောဒါ….သူတို့ နှလုံးသားကိုထိနျးခြုပျမဲ့သူမရှိတော့လို့……သူတို့ခဈြတဲ့ သူ အမိနျ့ပေးကွညျ့ပါလားအမွဲ နာခံမယျ့….သူမြိုးတှလေေ…. သူတို့က……ခဈြသူထားဖို့တော့ ဝနျလေးတတျတယျအသဲကှဲမှာ ကွောကျလို့ မဟုတျဘူးသူတို့မှာ အခဈြဆိုတာ မရှိတော့လို့လသေလေောကျအောငျ ခဈြပွီးပွီမို့……နောကျထပျ […]
၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့ (၁၄ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းရှိ မားမားခေါက်ဆွဲခြောက် စက်ရုံ မီးလောင်…
၁.၂.၂၀၂၀ ရက်နေ့၊ (၁၄ ၀၀)အချိန်ခန့်၊ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၊ စက်မှုဇုန်(၃)၊ ဆိပ်ကမ်းသာလမ်းရှိ မားမားခေါက်ဆွဲခြောက်စက်ရုံ မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားကြောင်း သတင်းရရှိသဖြင့် Level 1 ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။ (၁၄ ၀၅)အချိန် Level2ယာဉ်အုပ်စုများ ထွက်ခွာငြှိမ်းသတ်လျက်ရှိပါသည်။ (၁၄ ၂၃)အချိန် Level3ယာဉ်အုပ်စုများ […]